७५ लाख आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्सको वित्तीय अवस्था - Aarthik Abhiyan
वैशाख २६,२०७८ / ०४ : ५५
७५ लाख आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्सको वित्तीय अवस्था
Aarthik Abhiyan 2077-11-9
फागुन ९, काठमाडौं । सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि रेटिङसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ । कम्पनीले नयाँ बीमा कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ७५ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि रेटिङ गराएको हो । कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि इक्रा नेपालमा रेटिङ गराएको हो ।
कम्पनीले निष्कासन गर्ने आईपीओलाई इक्रा नेपालले इक्रा एनपी आर बीबीबी रेटिङ दिएको छ । उक्त रेटिङले कम्पनीको आधारभुत अवस्था मध्यम रहेको देखाउँछ । साथै रेटिङले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमता औषत मध्यम जोखिम रहेको देखाउँछ ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । ७५ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन पछि पूँजी रू. २ अर्ब ५० करोड पुग्नेछ । हालसम्ममा कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि सेबोनमा निवेदन दिएको भने छैन ।नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती पाएपछि कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नेछ ।